Inkathi yokuHlawula - isikhathi sokuzihlanza okungokomoya nokungokwenyama. Abefundisi siphikelele ngokuthi akuyona ingozi ongaphambili kumele ame bashabalala engokomoya kanye ukuhlanzwa, ngoba "abaluleke kakhulu kule post - ungadli nomunye ...". ngomthandazo nangokunxusa ukuphenduka isikhathi kumelwe nakanjani kuhambisane bashabalala ngokomzimba, kuhlanganise nokusetshenziswa imikhiqizo ethile. I nzima kakhulu ukuze sibhekane nalesi simo inkathi yokuhlanza izingane kanye nabantu zomsebenzi bokusungula, kanye izinyo elimnandi. Ukuze operation evamile zobuchopho kuyadingeka glucose, umzimba uthola imikhiqizo yayo amnandi futhi ukudla okunoshukela kakhulu zazo enqabela ukusetshenziswa kule post. Nokho, bambalwa bayazi ukuthi izingane eziningi kanye nabantu abadala amaswidi ozithandayo abayekiswanga ngesikhathi Ebolekwe.
imikhiqizo Izithelo esekelwe pectin noma agar
Modern confectionery umkhakha uye kushintshwe ukukhululwa kwe imikhiqizo esithengisa amaswidi okusekelwe izithako ezahlukene. Njengoba sazi ukuthi we Meatless izitsha akufaki zonke izingxenye okuvela ezilwaneni, iningi amaswidi kokuthunyelwe labizwa ngokuthi akuvumelekile. Ukukhetha okukhona ukuba badle, ngokuzila ukudla, ngokuvamile sinake indlela yokwakheka umkhiqizo. Abaningi e-umbuzo ofanayo kuphakama: "Bekungumuntu onjani candy unga e okuthunyelwe? Ngingaba nayo lwebhece kokuthunyelwe? "
Ukwakheka ezinye izinhlobo lwebhece zihlanganisa gelatin - umkhiqizo okumsulwa okuvela ezilwaneni, kodwa njengengxenye nezinye izinhlobo ingafundwa "pectin" noma "agar-agar". Futhi yena nabanye ukuqina namanxusa bangabantu zemifino. Labo imikhiqizo izithelo kanye berry, okuyinto ekhiqizwa ngesisekelo yemifino binders (marmalade, jelly amaswidi), umuntu ngokuzila ukudla ungadla ngokuphepha.
Marshmallow luyindida kancane ngaphezulu. Lo mkhiqizo has ukubunjwa yayo amaqanda amaprotheni ukuthi abavunyelwe ukudla ngesikhathi Ebolekwe, okuyinto ngenxa yalokho kwenza marshmallow eyenqatshelwe okuthunyelwe. Kungaba ohlwini ezivinjelwe lapha okuthunyelwe ohlanganisa uswidi owenziwe kanye candy, okuyinto ukubunjwa yayo has amaprotheni. Nokho, endabeni ukuthi singaba lwebhece kokuthunyelwe, ayikwazi ngokucacile iyaphendulwa okungekuhle. labapheki Modern kufanele anikele enye esikhundleni amaprotheni lwebhece.
Marshmallow - esikhundleni okunye amaprotheni lwebhece
Modern lwebhece isihlobo kanye lwebhece esanda kutholakala ezimakethe Russian. izingxenye zalo athé ukwehluka umkhiqizo yasekhaya, ngoba amanzi asetshenziswa esikhundleni amaprotheni, corn isitashi futhi abilisiwe juice kwamagilebhisi. Lezi zingxenye ukunikeza umphumela efanayo ukusetshenziswa amaprotheni, kodwa ubumnandi yokwenza ngokuzila ukudla okungabizi. Ngingaba nayo lwebhece kokuthunyelwe, kulula ukukuqonda, sidinga kuphela umkhiqizo. Zephyr kokuthunyelwe edliwayo ngaphandle kokwesaba isono, uma okulungiselelwe lwebhece ubuchwepheshe.
Pastries for Ebolekwe
Ngaphandle lwebhece kanye marmalade, uhla kuvunyelwe kule post imikhiqizo amnandi iqukethe amaningi nezinye awukudla. Abalandeli khekhe nezitolo ezinkulu ukunikeza izinhlobo olukhethekile amakhekhe namakhukhi. Amakhukhi e okuthunyelwe kuvunyelwe uma ayiqukethe Skoromniy imikhiqizo. Omunye ethandwa kakhulu izinhlobo zamakhukhi ezinganeni nakubantu abadala kuyinto amakhukhi oatmeal.
imikhiqizo ewusizo nokunomsoco amnandi ebhikawozi, ngaphezu kwalokho, kahle ukusetshenziswa ehhovisi, ngoba iqukethe akukho amafutha isilwane futhi amaqanda. Ngaphezu kwalokho, izinhlobo eziningi Puff khekhe Skoromniy musa unezithako ezenza imikhiqizo yabo atholakale umthengi enkathini bashabalala kanye ukuhlanzwa. khekhe Puff isetshenziswa kokuzila ngokuzila ukudla ngemva kokutadisha ngezithako zawo:-ke akufanele kube imajarini (ngaphandle yemifino) kanye namaqanda. Ukwakheka ezithakazelisayo okusaswidi mafutha etholakalayo ekhaya bhaka ukukhiqizwa confectionery mass. amakhukhi Lenten kanye Gingerbread uncamela ukusebenzisa okuthunyelwe kukhona labo abangenzanga ishaqeke inkinga ka isisindo okweqile.
A ukumangala emnandi ngokuba umuntu ukuba akwazi ukubona fast, kukhona isixazululo ukwenza isipele ukuphoqa ucezu ushokoledi. Chocolate e okuthunyelwe hhayi kuphela kuvunyelwe, kodwa kunconywa izinto eziningi ezincane. The main imfuneko choice yakhe - ukungabi oluphelele ingxenye lo whey, avalele imikhiqizo, ezilwane. Ngakho-ke, ushokoledi ophelele okuthunyelwe - black ezibabayo. Ngo oyiyo kukhona cocoa ibhotela kuphela, nokhokho oyimpuphu kanye noshukela. ushokoledi Lean ngokuvamile amaphesenti cocoa okuqukethwe kusuka 58% kuya ku-99%, ngesikhathi ngezithako zawo kwilebula akukho ubisi ezilwane. Ukudla shokolethe kukho neNkabazwe ukuthi avame ukuhamba ukudla.
Zogwadule ngaphandle kokuvinjelwa
Ngaphezu shokolethe, candy anhlobonhlobo imikhiqizo ukunikela confectioneries ukusetshenziswa kule post. Lezi ushokoledi zingenalo Skoromniy imikhiqizo, Ukwakheka kwabo yemifino izithako kuphela. Candy kokuthunyelwe kudliwe ukulinganisela ukuze ugcwalise nokushoda glucose esikhathini kusuka 4 kuya ku-6 ntambama. Ngokusho kwezazi, lo kulezi amahora ubuchopho kuthatha lemali enkulu yomsebenzi edingekayo ukuba glucose, yingakho babambeke ubumnandi kule sikhathi ngangokunokwenzeka uzoya injongo yayo eqondile. Uvunyelwe ukuba ukudlele ngesikhathi jelly yokuHlawula, fondant candy, candy izindondolo, ezinye izinhlobo uswidi. Of ushokoledi - yilabo kuphela ukuthi embozwe ushokoledi elimnyama. nati Kuphephile umuntu ogcina Ukudla Lenten, uzobe losiwe ushokoledi candy, njengoba kokubili ukugcwaliswa Uqweqwe e ushokoledi enjalo zingenalo Skoromniy izingxenye.
amaswidi Meatless Oriental
Ngaphezu ushokoledi namaswidi ngokuzila ukudla angakwazi ukukhokhela ngisho imali eyanele akusona esihlwabusayo kuphela kodwa futhi uju ewusizo kakhulu. Halvah - umkhiqizo ehlanganisa ngokuphelele izithako zemifino. Ngaphezu kwalokho, lesi sidlo yaziwa njengenye omunye ukudla ziwusizo ikakhulu okunoshukela. Halva Kunconywa ukuba isetshenziswe ezinganeni nakubantu asebekhulile, njengoba sonke sazi impahla yayo, ngcono wamathumbu umsebenzi. Iqukethe lokhu Eastern dessert amavithamini, sodium, phosphorus, i-potassium, ne-ayoni. Halva uyala umzimba ne amandla, kanye nobuchopho - glucose. Okucishe Ukwakheka halva kozinaki okuyinto okunezinhlobonhlobo ezinkulu. Yenza le East amaswidi izithako ezahlukene: imbewu, amantongomane, izinhlamvu ze-sesame, kodwa zonke izingxenye njalo Lokudabuka isitshalo. Yilokho okwenza le amaswidi kokuthunyelwe etholakalayo ukusetshenziswa ngaphandle kwemingcele.
Ngakho manje umbuzo yini bumnandi okuthunyelwe, Ngingazijabulisa lwebhece kokuthunyelwe, wathola impendulo, futhi ungenza uhlu kophudingi amnandi, bavunyelwe abagcina imithetho sokuzila ukudla.
Uhlu Lenten amaswidi libukeka kanje:
• marmalade esekelwe pectin noma agar-agar;
• marshmallow nokulahlwa swidi "lwebhece" ubuchwepheshe;
• jellies, ezinye izinhlobo fondant ushokoledi, amantongomane okugazingiwe ushokoledi, caramel, candies;
• shokolethe (okuqukethwe ukhokho ka 58%);
• Halva, amantongomane kozinaki ushokoledi elimnyama;
• izithelo candied, izithelo ezomisiwe;
• nati, ushukela noma izithelo nopende ocwebezelayo.
Loluhlu ngempela umxhwele uma ucabangela ukuthi cishe zonke izinhlobo jam, ujamu, ujamu uvumelekile ngaphandle kwemingcele kwimenyu okusheshayo. Ngakho-ke, ukuze ugweme bikho glucose kuhambisana nemithetho ukunikezela mafutha kungenzeka, kulandela izincomo elula: adle amaswidi zakho ozithandayo, ungakhohlwa ukuba uhlolisise amalebula izithako umkhiqizo.
Ukuminza - kuwuhlobo lobugqila
Igama usuku Boris sika. Life of St ukholo Boris
Iholide Professional - Usuku ngomshuwalense
Sunset Hotel Sharm (IGibhithe, Sharm El Sheikh): Incazelo, Ukubuyekezwa